Golaha Aqalka Sare oo maanta labo arrin diiradda ku saaray kulankooda – Bandhiga
Golaha Aqalka Sare oo maanta labo arrin diiradda ku saaray kulankooda
Guddoomiye ku-xigeenka Labaad Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mowliid Xuseen Guhaadayaa maanta shir guddoomiyey kalafadhiga afaraad kulankiisa tobanaad ee Golaha.
Kullanka maanta ayaa ayaa diirada lagu saaray Qaraxii shalay ka dhacay Xaawo Taako iyo Qubaro kulanka looga dhageystay nidaamka Federaalka.
Mudane Mowliid Xuseen Guhaad oo kullanka ka dib warbaahinta la hadlay ayaa marka wuxuu tacsi u diray ehalada iyo asxaabta dadkii ku geeriyooday Qaraxii shalay argagixisadu ay ka fuliyeen isgoyska Xaawo Taako ee magaalada Muqdisho,isagoona dhinaca kale caafimaad rabi uga baryayay dadkii dhaawacmay.
Guddoomiye ku-xigeenka Labaad ee Golaha Aqalka sare ayaa Xukuumadda,Baarlamaanka iyo shacabkuba ugu baaqay in loo gurmado dadkawaxyeelada ka soo gaareen Qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale,Senator Cabdkaafi Macallim Xasan oo ah Hab-dhowraha Golaha Aqalka sare ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha kale ee looga hadlay kullanka,wuxuuna sheegay in warbixin looga dhageystay quburo ku xeel dheer nidaamka Federaalka iyo dowrka Aqalka sare ee ilaalinta danaha Dowlad Gobolleedyada.
Magaalada Baladweyne oo laga mamnuucay Dibadbaxyada
Maxaa ka jira in dacwad loo heysto qaar kamid ah Bangiyada dalka?